रुघाखोकी हटाउन यस्तो औषधी ! खानु कसरी ? - IAUA
रुघाखोकी हटाउन यस्तो औषधी ! खानु कसरी ?
ramkrishna November 21, 2016	रुघाखोकी हटाउन यस्तो औषधी ! खानु कसरी ?
जाडोले ल्याउने संक्रमणबाट जोगिनका लागि घरेलु र डाक्टरी औषधीको सबैले सिफारिश गर्छन् । भिटामिन सी टन्न खाने सल्लाह पनि दिने गरिन्छ । तर यसको एउटा नौलो उपचार पनि आएको छ । ‘ट्रेसी किस’ नाम गरेकी एक महिलाले पुरुषको वीर्यबाट बनेको औषधीले रुघा पूरै ठीक हुने बताएकी छन् ।
यी ‘भिगन (पूर्ण शाकाहारी ) ट्रेनर’तथा सौन्दर्य विशेषज्ञले फलफूल, नरिवलको दूध र बदामको दूधमा वीर्य मिसाएर पिएमा रुघाखोकी हटाउन सकिने बताए । यही मिश्रणले अनुहारको चमक पनि बढ्ने उनले बताएकी छन् । ऊर्जाक्षय र थकानको महसूस गर्ने व्यक्तिले यो मिश्रण पिउँदा ऊर्जा प्राप्त गर्ने उनी बताउँछिन् । मिरर युके
Previous Previous post: घरेलु सामग्रीबाटै यसरी भगाउनुस् कक्रोच !
Next Next post: चिसो मौसममा खानैपर्ने ५ फलफूल